Biyyoota badhaadhan biratti mariiwwan waa'een mana barnootaa, yeroo baayyee dhimma siyaasarratti dursa kennamaafi. Kunis gosa barnootaa kamtu caalaa barbaachisa, eenyutu gargaarsa dabalataa barbaadaafi kamiitu caalaa bajata barbaada gama jedhuun ilaalama.
Garuu maatii biyyoota guddina irratti argaman hedduuf gaaffiin barnootaa cimaan caalaa waa'ee bu'uuraa baay'ee ta'u mala; fakkeenyaaf siriiyyuu mana barumsaa argachuu ni danda'amaa? kan jedhu fa'i.
Odeeffannoon Mootummoota Gamtomanii akka himutti, jaarraa darbee keessa rakkina iddoowwan mana barumsaa biyyoota hiyyeeyyii muraasa hiikuuf sochiin ''omtuu hintaasifamne.''
Gabaasa qulqullina barnootaa xinxaleen kan biraa fi motummoonni gamtooman akka jedhanitti, bu'aaleen argamanis waa'ee ijoollee miliyoona 600 olii mana barnootaatti argaman garuu kan omaa barataa hinjirree bitintiraadha.
Biyyootta durooman biratti garuu, qabxii barnootaatiin shamarran kan ijoollee dhiiraatiin dursaa jira. Biyyoota hiyyeeyyii kan akka Afiriikaa Sahaaraan gadii keessatti ammoo shamarran baayyeen barnoota aaddaan kutu.
Guyyaa duula misoomaa idil-Addunyaa motummoota gamtomaniitiin, bakka barnoota shamarraniitiif baayyee cimaa ta'e irratti sadarkaan kaa'ameera.
Guutuu biyyoota kurnan kanneenii hunda keessattuu kan mana barmootaa ala jiran hedduun shamarran.
Isaanis biyyoota sababii waraanaafi walitti bu'iinsaatiin bittinaa'uun maatii baay'een hiyyummaa, dhukkubbii, hir'ina soorataa cimaafi bakka jireenyaatii buqqa'aniidha.
Ijoolleen dubaraa baayyeenis barachuurraa akka hojii hojjataniif eegamu. Kaan ammoo ijollummaan herumuun carraa barnootaa hanga dhumaatti dhabu.
Akka odeefannoo motummoota gamtoomaniitti, naannoo walitti bu'insaatti, shamarran harka sadiin caalaa baruumsa dhaabu.
Sadarkaan keenname, dhimmi bu'urreeffate:
Hammeentaa shamarran barumsa sadarkaa tokkoffaa xumuranii
Baayyina dubartoota hinbaratin
Akkasumas namoota akka Aaddee Filoorensi fa'iif, kan mandara Keenyaa fagoo keessa jiraachuun umurii 60 irratti dubbisuu barataniif ammo bu'aa olaanaa qabaata.
Geel Isimiiz, pirezidaantiin duula Tokko, hanqina barnoota shamarraniin ''kufaatii addunyaa hiyyummaan akka itti fufu taasisuu'' jette jirti.
Ameerikaafi Kanaadaan waggoota 50tti simbirrota bil.sadii dhaban